मैले यसरी पदक बाँडेको भए वुद्धिजीविहरु के भन्थे होलान्ः ओली « Bagmati Samachar
५ आश्विन २०७८, मंगलवार १६:३२
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले सरकारले मनमर्जि रुपमा पदक बाड्ेको आरोप लगाएका छन् । मंगलबार राजधानीमा मदन भण्डारीको जिवनी लेखिएको पुस्तकको वितरण कार्यक्रममा उक्त आरोप लगाएका हुन । उनले अहिलेको सरकारले पदक रत्नपार्कमा बसेर बाँडेझैं बाँड्दा पनि बुद्धिजीवि र नागरिक समाज केहि नबोलेको भन्दै आक्रोस पोखेका छन् ।
ओलीले यदि पदक बोल्ने र आँखा देख्ने भए कित नाराजृुलुस गर्थे कि त धरधरी रुने बताएका छन् । उनले भने ‘म प्रधानमन्त्री भएको बेला यसरी पदक बाडेको भए के हुन्थ्यो ? बुद्धिजीविहरु के भन्थे ? नागरिक समाज के भन्थ्यो ? आज सब चुप छन्, शान्त छन् ।’
वकिललाई,अदालतलाई ,विरोधमा बोल्ने टेलिभिजन, अखबार आदि इत्यादिलाई सबैलाई पदक वितरण गरेको छ, त्यहि भएर सबै चुपचाप रहेको बताए । उनले भने ‘म प्रधानमन्त्री भएको बेला यसो गएको भए ओ हो के हुन्त्यो ? वुद्धिजीविहरु के भन्थे ? नागरिक समाज के भन्थ्यो ? आज रमाइलो छ, सब चुप छ, शान्त छ ।’